चरित्रहीन प्रतिनिधि र दर्शन विनाको राजनीति – ebaglung.com
चरित्रहीन प्रतिनिधि र दर्शन विनाको राजनीति
२०७४ कार्तिक ६, सोमबार ०७:५३	Footer Slider, Top News, अन्य समाचार, विविध
देशको हालत सोंचनीय छ । यो हालत बनाउनेहरु अहिले जनतासामु मत माग्न आउने राजनैतिक दलहरु नै हुन । कुनै आरोप होईन सत्य यही हो । देश विगार्ने अहिले चुनावमा आएका अनुहार नै हुन ।
राजनीति जनता, समाज, देशका लागि हुनुपर्छ । यहाँ देशसँग मतलव राख्ने कोही जनप्रतिनिधि भेटिएनन् । जनताको सरोकार राख्ने कुनै दलपनि भेटिएन, न त भेटियो सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नसक्ने जनप्रतिनिधि नै । सबै समाउ, कमाउ खाउमा मात्र सीमित देशको राजनीति, राजनैतिक दलका नेताको चरित्र देखियो ।
कोही सरकारमा पुगे, नदीनाला बेचेर खाए । कोही जहाज घोटाला गरेर खाए कसैले भुकम्पपीडितका नाममा आएको जस्तापाता समेत छाडेनन् । कोही अझैपनि कामनपाएको मन्त्रीपद ओगटेर जनताको पसिना दोहन गरिरहेका छन् । यतिखेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्मुखमा आइरहेको छ । जनताकाबीचमा जनमतको दुरुपयोग गर्ने अनुहार र दलहरु मतमाग्न आइरहेका छन् । नेपाली जनता सचेत नभएको पनि होईनन् तर सचेत हुँदा हुँदैपनि सीमित स्वार्थमा अलमलिने देशको राजनैतिक अवस्थाले दिग्भ्रमित पारेको भने पक्का हो । अलिअलि पढेलेखेकाहरु विदेशमा छिरेका छन् । सामाजिक सञ्जालहरुमा उनीहरुको विचार, मत र अभिमतहरु कसैका घतलाग्दा छन त कसैका आफु कुनै पार्टीका बडेनेता हुन जस्तापनि लाग्छ । यो बसिवियाँलो मात्र हो । देशका उर्जाशील युवालाई यही राजनीतिले विदेशमा बेचिरहेको छ । लाग्छ, कतिपय राजनैतिकदलहरु बर्षैासम्म एक घर एक रोजगारी भन्दै आफ्नो घोषणापत्रमा लेख्छन । रोजगार उस्ले देशमा होईन, विदेशमा तोक्छ । अनी विदेशमा पुगेर पसिना बगाएको लाहुरेले पठाएको रेमिट्यान्सले पालै पालो गठबन्धन गरेर सत्ताको रसस्वादन लिन्छ । यो हाम्रो राजनैतिक नेताको चरित्र हो र लगाम विनाको घोडा जस्तो, दर्शन विनाको राजनीति पनि हो ।
हामीले खाजेको नेता सादगी हुनुप¥यो । जनताको सुख दुःखसम्म पुग्न र महसूस गरि उनीहरुको सेवाका लागि हुनुप-यो । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र उसले आस्था राखेको राजनैतिक विचारका आधारमा सीमित व्यक्ति जनप्रतिनिधि हुन सक्दैन । आजसम्म देखेका प्रतिनिधिहरु त्यसभन्दा माथि उठेको पाइएको छैन । त्यो शिक्षा संस्कार कुनैपनि राजनैतिक दलहरुमा छैन ।
भनिन्छ, मान्छे विचारले चल्छ, विवेकको कन्ट्रोलमा हुन्छ, समय सन्दर्भ अनुसार सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै उच्च चेतनशील व्यवहार प्रकट गर्दछ । त्यसका लागि उसलाई दर्शन—विचार र व्यवहारलाई बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । दर्शन भनेको सामाजिक सुशासन सहितको विधान हो । विचार भनेको व्यवहारका लागि दर्शन र व्यवहारको मुल यन्त्र हो । दर्शन र विचारले व्यवहार परिवर्तन गर्दछ । व्यवहार परिवर्तन भनेको मान्छेका दुःख, सुख, आपत्ति, विपत्ति, मेल बेमेलमा समाहित हुने हो । जनताको मनमनमा पुग्ने गरि व्यक्तिगत तथा समुहगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर गरिने उत्कृष्ठ सामाजिक पहिचान हो । आज त्यसो हुन कोही मान्दैन । जस्लाई पनि कमाउने रहर छ । खाने मन छ, आफ्नो पोल्टाको कुरा गर्ने बानी परेको छ । ‘भन्दा समाजका लागि गर्दा आफ्ना लागि’ यो नै नेपाली राजनीतिमा पुराना पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई सिकाएको घिनलाग्दो पाठ हो । यसबाट मुक्त हुन कसैले चाहँदैनन् वा भन्छन् चाहेर पनि हुँदैन ।
जनताका जनप्रतिनिधिमा जवसम्म नैतिक बन्धन हुँदैन, स्वच्छ, निर्भिक र शानदार व्यक्तित्व हुँदैन तवसम्म सबै विभिन्न बहानामा देश र जनताको खुनबाट संकलित राजश्व दोहन गर्ने पात्र मात्र हुन् । अहिलेका राजनैतिक दलहरु आफ्ना स्वार्थका लागि बनेका देशखाने ठेकेदार गुटहरु हुन् । यी र यस्ता चरित्रहीन र दर्शनविहीनहरुबाट देशको विकास हुन्छ भन्नु, चम्चामा पानी भरेर डुँगा शयर गर्नु सरह हो ।
हामी आफ्ना् प्रतिष्ठा बेच्छौं । निष्ठामा खोट लगाएर बस्छौं । हैसियत माथि प्रश्न चिन्ह टाँगेर हाँस्छौं । राष्ट्रवादका कुरा छाँटछौं । तेरो यो र मेरो यो भनेर गरिखाने वर्गका जनता भाँडेर गरिवीमाथि खेल्छौं । अनी उच्च कोटिको सामाजिक व्यक्तिको पगेर आफै गुथेर किच्च हाँस्छांै । फर्केर हेरौं हिजोको बेथिति, चिन्तित होईन चिन्तनशील बनौं आजको दिनमा अनी दीर्घकालका लागि हिजो गरिएका इतिहासबाट सच्चिने हिम्मत गरौं । समाज यही हो, देश यही हो, दल र तिनका नेताको चरित्रमा फेरवदल आएको कहिले देख्ने, कस्ले देखाउने, कस्का लागि अव कस्ले राजनीति गर्ने ? प्रश्नहरुमाथि बहश थालौं । होइन भने, जुन जोगी आएपनि कानै चिरेका भने झै, यो देशमा काँग्रस, एमाले, माओवादी लगायतका कुनै दल नयाँपनि होईनन् । यिनले सत्ता चलाएको नेपाली जनताले नदेखेका नभोगेका पनि होईनन् । कहाँ कहिले कुन चरित्र सुध्रियो र मैले तपाईलाई मतदान गर्ने ? मेरो प्रश्न व्यक्तिगत होईन । आमाको पुरानो चोली, बाबाको फाटेको टोपी, श्रीमतीको च्यातिएको पछ्यौरी र भोलिका भविष्य भनिएका सन्तानका लागि शिक्षा स्वास्थ्यको जोहो गर्न अर्कोको मुलुकमा पुगेका दाजुभाई दिदीवहिनीहरु जीवनीसँग यो राजनीति र तपाई प्रतिनिधि भएर के परिवर्तन आउँछ ? जवाफ दिनेसँग जफावदेहिता छैन । प्रश्नकर्ताहरु यहाँहरुको लिला हेरेर आफ्नो दिनदशामा राज्यविहिन भएर एक्लै लडिरहेका छन् ।
चरित्रहीन प्रतिनिधीहरु भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, व्यक्तिवादी, नातावादी र कृपावादी हुन् । दर्शनविनाको राजनीति आफ्ना स्वार्थका लागि मैखाउ मैलाउँ भन्ने आशयले गुटबनेका समुह हुन् । यिनलाई देश, जनता, बाटोघाटो, पुल पुलेसा, विद्युत, खानेपानी, शिक्षा, स्वस्थ्य यो देशका नागरिकका आवश्यकता हुन भन्ने चेत हुँदैन । पदका लागि मरिहत्य गर्दछन् । प्राप्त गर्छन र उतै रमाउँछन् । यस्तै चुनावी पर्वमा रंग दलेर फेरि हावा कुरा गर्न हाउँछन् । सचेत जनताले यत्ति बुझ्दछन् ।
२०७४ कात्तिक ६
* लेखक ईबागलुङका संपादक हुन् ।
बागलुङमा मनोनयन दर्ता शान्तिपूर्ण : २ नं क्षेत्रको प्रदेश ख मा एमालेका शर्मा बागी निस्किए !
प्रवास: गल्कोट समाज अस्ट्रेलियाको आयोजनामा सिडनीमा एक दिवसीय भलिबल प्रतियोगिता